SomaliaReport: Baarlamaanka DKMG Kursiga ka Tuuray Afgayeenka
By AWEYS CADDE 12/03/2011
Kulan ay isugu yimaadeen in ka badan 100 xubnood ee baarlamaanka Somalia ayaa ku shiray Muqdisho Khamiistii iyagoo xilkii ka xayuubiyey Afhayeenka, Shariif Xasan Sheekh Aaden. Si loo dhanyahay ayey afhayeenka ugu eedeeyeen inuu diiday dib ufurida baarlamaanka, kana mamnuucay inuu matalo golaha, marka kagu daro ka qaybgalida shirarka caalamiga ah.
Xildhibaan Abuukaate Sheegow oo la hadlay Somalia Report, ayaa yiri “Markii aan aragnay xadgudubka faraha badan ee afhayeenka ee ku wajahan heshiisyada DKMG iyo jebinta xeerarka baarlamaanka, waxaan go’aansanay si ku meelgaar ah inaan xafiiskiisa ka saaro. Ma uu hogaamin doono shirarka baarlamaanka kamana qaybqaadan mayo shirarka caalamiga ah, ilaa baarlamaanku go’aan joogta ah ka gaarayo.”
Xildhibaan kale, Maxamed Nuur ayaa isna ku hanjabey inuu afhayeenka xafiiska ka saarayo. Wuxuu ballan qaaday maalmo gudahood, inay ku qaadidoonaan cod kalsooni daro ah afhayeenka.
"In badan ayaan isku daynay inaan afhayeenka ka dhaadhicino inuu dib ufuro doodaha baarlamaanka, si looga doodo qorshaha dowlada, laakiinse wuu diiday una dhawmay sidii kaligi-tashade," ayuu u sheegay Somalia Report. "Waxaan ku guubaabinaynaa dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo saraakiisha dowlada inay nagu caawiyaan sidii fal uga qaadi laheen Shariif Xasan."
Xubnaha baarlamaanka Soomaaalidu ma qaban doodo caadi ah ilaa mud oafar bilood ah.
Afhayeen Shariif Sheekh Aaaden waxay codka kalsooni-daradu soo wajahday markii xilka laga tuuray 2007.